‘मेडिकल फेल’ का नाममा नेपाली श्रमिक फिर्ता नपठाउने – NamoBuddha Khabar
‘मेडिकल फेल’ का नाममा नेपाली श्रमिक फिर्ता नपठाउने
आइतबार, बैशाख २४, २०६९ | ६:३६:४९ |
क्वालालम्पुर -मलेसिया, पुस ४ –
मलेसियाले सानातिना स्वास्थ्य समस्यालाई आधार बनाएर नेपाली श्रमिक फिर्ता नपठाउने भएको छ । प्रस्ट रोग नदेखाई ‘मेडिकल फेल’ का नाममा पनि अब नेपाली कामदार फर्काइने छैनन् ।
नेपालमा स्वास्थ्य परीक्षणमा सफल भई मलेसियामा विफल भएर गत वर्ष ४ सय ८६ नेपाली कामदार फर्काइएका थिए । तिनीहरूको नेपालमा पुनः परीक्षण गर्दा ३५ जनाको मात्र वास्तविक विफल भएको पाइएको थियो । केही समयअघि एचआईभी/एड्स संक्रमित भनेर मलेसियाले पठाएका १० श्रमिकको नेपालको सरकारी प्रयोगशालामा पटक-पटक पुनः परीक्षण गर्दा त्यो रोग पाइएको थिएन ।
यस्ता घटना बढेपछि समाधानका लागि सरकारले पठाएको विशेषज्ञ टोलीसमक्ष मलेसिया सरकारका उच्च अधिकारीहरूले समस्या न्यूनीकरणको प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग भएको भेटमा मलेसियाले उपचार हुन सक्ने सरुवा रोगको मलेसियामै उपचार गरी फिर्ता नपठाउने सहमति जनाएको छ । अब उपचार हुन नसक्ने अवस्थामा मात्र नेपाल पठाइनेछ । त्यसैगरी वातावरण नसुहाएको -इन्भाइरोमेन्टल अनसुइटेबल) जस्ता समस्या देखाई फिर्ता पठाउने गरेकामा अबदेखि पठाउनै परे प्रस्ट कारण खुलाउने भएको छ ।
मलेसियाबाट फिर्ता हुने नेपालीको ठूलो संख्या एक्सरे गर्दा छातीमा दाग देखिने समस्या -क्याल्सिफिकेसन) भएका छन् । टोलीका नेपाली विशेषज्ञ चिकित्सहरूले यो कुनै रोग वा रोगको लक्षण नभएको वास्तविकता प्रस्तुत गर्दै फिर्ता नपठाउन आग्रह गरेका थिए । प्रत्युत्तरमा मलेसियाली अधिकारीहरूले यसका लागि छुट्टै नीति बनाउन पेस गर्ने सहमति गरेका छन् । स्वास्थ्य बिमा लागू गर्न पनि नीति बनाउने भएको छ ।
नेपाली विशेषज्ञ टोलीले मलेसियाको स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्थानीय नियोग, मलेसियन मेडिकल एसोसिएसन, विदेशी कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणको जिम्मेवारी पाएको संस्था फोमेमा लगायतका अधिकारीसँग भेटवार्ता गर्‍यो ।
भेटवार्ताको नेतृत्व गरेका नेपाली राजदूत डा. ऋषिराज अधिकारीले नेपाली श्रमिकका समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिइदिन आग्रह गरेका थिए ।
मलेसियाली पक्षले पनि नेपाली श्रमिकको योगदान र इमानदारीको प्रशंसा गर्दै अनाहकमा दुःख पाउने स्थिति हटाउने विश्वास दिलाएको छ । वार्तामा मलेसियाली अधिकारीले नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत १ सय ५३ वटा संस्थाका मेडिकल रिपोर्टलाई मात्र मान्यता दिने व्यवस्था कडाइसाथ लागू गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पनि जनाए । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२ मा सरकारद्वारा मान्यताप्राप्त यस्ता संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, धेरै अनधिकृत संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षणको कार्य गरिरहेको र त्यस्ताका रिपोर्टका आधारमा श्रमिकले विदेश आउन पाइरहेकाले समस्या थप बढेको छ ।
गत वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएर स्वास्थ्य परीक्षण विफल भई फर्काइएका कुल नेपाली कामदारको ९०.३३ प्रतिशत मलेसियाबाट मात्र छन् । त्यही कारण समस्या के हो, ठूलो पुँजी लगानी गरेर गएका नेपाली कामदार खाली हात र्फकनुपर्ने स्थितिलाई कसरी घटाउन -सकेसम्म हटाउन) सकिन्छ भन्नेजस्ता विषयमा भ्रमण केन्दि्रत रह्यो । मलेसियामा नेपाली श्रमिक जाने क्रम बढ्दो छ । नेपाली दूतावासका अनुसार २०६६/६७ मा मात्र यहाँ १ लाख १३ हजार ९ सय ८२ नेपाली श्रमिक भित्रिएका छन् ।
टोलीमा राजदूत अधिकारी, राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति तथा मेडिकल काउन्सिलका सदस्य प्राडा दामोदरप्रसाद पोखरेल, श्रम मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सूर्यप्रसाद अधिकारी, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खड्गबहादुर श्रेष्ठ, कान्ति बाल अस्पतालका चिफ कन्सल्ट्यान्ट रेडियोलोजिस्ट डा. तीर्थराज बुर्लाकोटी, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका सिनियर कन्सल्ट्यान्ट एवं छातीरोग विशेषज्ञ डा. शरतचन्द्र बर्मा, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव राजाराम बर्तौला, नेपाली दूतावासका काउन्सेलर लेखनाथ भट्टराई, महासंघका महासचिव प्रवीण तिवारी, कैलाश खड्का र नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव कुमुद खनाल थिए ।